सञ्चार राज्यमन्त्री बाँस्कोटाको नजरमा प्रधानमन्त्री ओली| Nepal Pati
सञ्चार राज्यमन्त्री बाँस्कोटाको नजरमा प्रधानमन्त्री ओली
समय पत्रकारितामा जमेका गोकुल बाँस्कोटा यतिवेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री छन् । अन्य मन्त्री पुल्चोकस्थित सरकारी क्वार्टर सरे, तर राज्यमन्त्री भएलगत्तै बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीको भक्तपुर बालकोटस्थित निजी निवासमा डेरा सरे । यही कारण ओली र बाँस्कोटाको सम्बन्ध निकट भएको चर्चा सुरु भयो । तर, बाँस्कोटाले विद्यार्थीजीवनदेखि नै ओलीसँग नजिक थिए । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा बाँस्कोटा रेडियो नेपालको ‘घटना विचार’ कार्यक्रममा संलग्न भए । त्यही वेलादेखि उनको सम्बन्ध ओलीसँग नजिक भयो । राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको नजरमा केपी शर्मा ओली कस्ता छन् ? उनकै शब्दमा :
मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्या हुँदा हामी बुझ्ने भइसकेका थियौँ । नेपालको वाम–प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अतुलनीय योगदान पु-याउने जननेताको निधनपछि जनताको बहुदलीय जनवादको बुझाइ र नेतृत्वमा देशव्यापी अन्योल छायो ।
लगत्तै अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीले भद्रकालीको कृषि आयोजना केन्द्र (एप्रोक्स)मा कार्यक्रम राख्यो । केपी ओली प्रमुख वक्ता रहेको त्यस कार्यक्रममा म संगठनको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सहभागी थिएँ । निरन्तर दुई घन्टाको उहाँको सम्बोधनले म प्रभावित भएँ । ओलीले मदनको विरासत जोगाउने भरोसासँगै आत्मविश्वास पैदा भयो ।
मान्छे आएको आयै, भेटेको भेट्यै, फोहोर हुन्छ । धेरै खोजेँ, तर उपयुक्त निवास फेला परेन । सत्य भन्दा, मन्त्री बनेपछि घरमा ७ दिनजति त सुत्न सकिनँ । एउटा बाथरुम, १० जना मान्छे पाहुना छन् । एउटाले घन्द्रांङ पार्छ, अर्कोले पनि त्यस्तै गर्छ, मन्त्री भएको हो कि, यातना पाएको !
यही कुरा जस्ताको त्यस्तै उहाँ (प्रधानमन्त्री)लाई दर्शाएँ । उहाँले भन्नुभो, ‘सारै गाह्रो परेको भए अहिलेलाई बालकोटमा बस्दै गर्नू ।’ यो मप्रति उहाँको विश्वास र माया दुवै हो भन्ने ठानेको छु ।
अरू तीन फिट अगाडि हेर्छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हजारौँ माइल टाढा हेर्नुहुन्छ । अरू गहिरोमा बसेर सोच्छन्, उहाँ उचाइमा बसेर सोच्नुहुन्छ । अरू अँध्यारो मात्र देख्छन्, तर उहाँ उज्यालो देखाउँदै आशाको सञ्चार गराउनुहुन्छ ।
मदन कमरेडको निधनपछि पार्टी विभाजनसम्म भयो । त्यसवेला उहाँ माधव नेपाल कमरेडको नेतृत्वको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभयो । अरूले उहाँलाई अनुचित माग राखेको भने होलान् । तर, मलाईचाहिँ जायज हो भन्ने लाग्छ । मैले उहाँको चाकडी या प्राप्तिका आधारमा सहयोग गरेको होइन । मेरो मूल्यांकन भयो होला, कतिपयलाई अलिअलि अन्याय भएजस्तो पनि भयो कि ? तर, मूल्यांकन सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ ।
नबुझ्नेहरूले हलुका ढंगले केपी कमरेडलाई ‘उखानटुक्के’ भन्लान्, तर उहाँले मिसन, भिजन र डेडिकेसनभित्र उखान–टुक्काको प्रयोग गर्नुहुन्छ । अझ त्यसभित्र योजनासमेत हुन्छ । उहाँले दिने विम्बमा सम्मोहनकला पनि मिसिएको हुन्छ ।
उहाँको एउटा उखानटुक्का मलाई याद छ । ०६४ को संविधानसभामा माओवादी केन्द्र पहिलो दल बन्यो । पार्टीभित्र वामपन्थीले सबैतिर जितेको छ भन्ने मत पनि आयो । त्यसपछि उहाँले भन्नुभो– ‘काकाको खेतमा धान फलेर के गर्नु ? आफ्नो खेत बाँझै छ ।
नेता ओली जसलाई पनि टेस्ट गर्नुहुन्छ । कुनै कुरा भन्दैमा कहिल्यै फकिनुहुन्न । सुन्नुहुन्छ, मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ । त्यस कुराको १० ठाउँबाट ‘क्रसचेक’ गर्नुहुन्छ । अनि विश्वास गर्नुहुन्छ । उहाँ कुनै पनि कुरा फ्याट्ट भनिहाल्नुहुन्न । जे कुरा फ्याट्ट भन्नुहुन्छ, त्यसभित्र भविष्य नियालिएको हुन्छ ।
उहाँ भगवान् होइन, आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । तर, कि कुरै नबुझेर उहाँको आलोचना हुन्छ, कि आफूलाई असर प-यो भनेर हुन्छ । कुनै कुरा गल्ती लाग्यो भने हामी पनि उहाँलाई औँला ठड्याउँछौँ ।
चेतनासहितको, योजनासहितको अपिलिङ पावर अर्थात् लोभलाग्दो कला उहाँसँग छ । कहीँ हिँडे पनि नहिँडे पनि घर बसीबसी उत्तर र दक्षिणतिर फर्किएका एमाले–माओवादीबीच एकताको सहमति, संयुक्त घोषणापत्र, वाम तालमेल अनि यति ठूलो निर्वाचन परिणाम ! के यो संगठन गर्ने कला होइन ? कसैले आलोचना गर्दा उहाँलाई मन परेन भने सुन्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ अनि उठेर हिँड्नुहुन्छ ।
बालकोट बस्दा संकट थपियो, आलोचना सुनाइदिन्छु अरूले राम्रा–राम्रा कुरा मात्रै उहाँलाई सुनाउँछन् होला, तर मचाहिँ नराम्रो पनि सुनाइदिन्छु । म यहीँ (बालकोट) बसेको हुनाले एउटा संकट थपिएको छ । बालुवाटारमा उहाँलाई भेट्न नपाउने साथीहरू यहाँ आउनुहुन्छ, आलोचना गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, आशा पनि राख्नुहुन्छ । ती सबै कुरा भेट भएका वेला म उहाँलाई सुनाइदिन्छु ।
तर, कहिल्यै पूर्वाग्रह राख्नुहुन्न । झगडा परेका वेला पनि अरू हातै नमिलाई हिँड्छन्, सिध्याउँछु भन्छन् । तर, उहाँ चुप लागेर बस्नुहुन्छ । भेट्दाखेरि कुनै दिन झगडा भएको थियो र ! जस्तो पार्नुहुन्छ । सम्बन्ध बिग्रिएका वेला उहाँ भन्ने गर्नुहुन्छ– कता हराइएको थियो ? ५–६ महिनासम्म हामीले एकले अर्कालाई नभेटेको स्थिति पनि छ । पूर्वाग्रह नसाँध्ने भएकाले सम्बन्ध जस्ताको तस्तै भइहाल्छ ।